विश्वकै धनि यी सुल्तानसँग छ ५००० भन्दा धेरै महँगा कार, तर कुनैमा पनि यात्रा गर्दैनन् ! | Rajmarga
विश्वकै धनि यी सुल्तानसँग छ ५००० भन्दा धेरै महँगा कार, तर कुनैमा पनि यात्रा गर्दैनन् !
ब्रुनेई संसारको सबैभन्दा सानो देश मध्यमा पर्ने गर्छ। यस देशको एक तर्फमा मलेशिया र अर्को तर्फमा दक्षिणी चीन समुद्र रहेको छ। दक्षिण पूर्व एशियामा तहेको देश एक टापुमा अवस्थित रहेको छ। यस देशलाई धेरै सुन्दर पर्यटकीय देश रहेको छ। यस देश धेरै धनि देशको रुपमा पनि मानिने गरिन्छ। यस देशलाई धेरै शान्त देशको रुपमा पनि हेरिने गरिन्छ।
पछिल्लो ४८ साल देखि एकै सुल्तानले राज गरिरहेका छन्। अहिले सुल्तान हसनअल बोल्कियाले ब्रुनेईमा राज गरिरहेका छन्। उनको जन्म १९४६ मा भएको थियो। उनले यस देशमा राज गर्न शुरु गर्दा उनि मात्रै २१ वर्ष उमेरका रहेका थिए। उनको पुरा नाम सुल्तान हाजी हसनअल बोल्किया मुइज्जदीन वादाउल्लाह रहेको छ। आज हामी उनी सुल्तानको बारेमा बताउने छौँ।
हसन बोल्कियाको परिवारले ब्रुनाईमा राज गर्न शुरु गरेको ६०० वर्ष पुगिसकेको छ। ६५ प्रतिशत मुस्लिम रहने यस देशमा रहेको नुरुल प्यालेस विश्वकै सबै भन्दा ठुलो शाही महलको रुपमा हेरिने गरिन्छ। यस प्यालेसमा २५०० भन्दा ओअनी धेरै कोठा रहेका छन्। यस प्यालेस सर्वासधनको लागि रमजान पछि ३ दिनको लागि खुल्ला गरिने गरिन्छ।
यस सुल्तानको प्यालेस २ लाख स्क्वायर फीटमा फैलिएको छ। उनको प्यालेसमा १७८८ कोठा रहेका छन्। यस प्यालेसमा २५७ वटा वाथरुम रहेका छन्। यी सुल्तान यति सम्म सौखिन रहेका छन् कि उनले आफ्नो घोडाहरुलाई एयर कंडीशनर प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यी सुल्तान कारको धेरै सौखिन रहेका छन्। उनिसँग ५००० भन्दा पनि धेरै कार रहेका छन्। 20 लेम्बोर्गिनी, १६० पार्ष, १३० रोयल रोयस, १७० जैगुआर, १८० बीएमडब्ल्यू और 150 मर्सेडीज बेन्ज जस्ता कारहरु उनको कार कलेक्सनमा पर्ने गर्छन्।
उनले आफ्नो सौखको लागी ठुला-ठुला जहाज समेत राख्ने गर्छन्। यी सुल्तान विश्वकै सबै भन्दा महँगो प्लेनका मालिक समेत रहेका छन्। २२ करोड डलर मूल्य बारबार पर्ने यस प्लेन आफ्नो सौखको लागि उनि प्रयोग पर्ने गर्छन्। उनि १९९३ मा विश्वका सबै भन्दा धनि व्यक्ति रहेका थिए। तथ्यांक अनुसार उनिसँग 20 अरब डलर रहेको छ। उनि आफ्नो कपाल काट्नको लागि मात्रै २०००० डलर सम्म खर्च गर्ने गर्छन्। उनका अहिले सम्म ३ विवाह गरिसकेका छन्। उनका पाँच छोरा रहेका छन् भने ७ छोरि पनि रहेका छन् ।
Previous post: भिरकोट नगरपालिकाको भवन शिलान्यास
Next post: ग्यास सिलिण्डर विष्फोट, १ जनाको मृत्यु, २ घाइते